မယ့်ကိုး: နှိမ့်ချစော်ကားသူများးနှင့် ခြားနားမတူချင်သူ
အပျိုကြီးဟု သရော်လှောင်ပြောင်ရာဝယ်ဆိုတဲ့ စာမှာ လူတစ်ဦးက ကျွန်မက သူမျာနဲ့မတူကြောင်း အရှေ့မှာရပ်တည်ပြသချင်တဲ့ စိတ်ရှိတယ်ဆိုပြီး မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ ကျွန်မက လူတွေရှေ့ရပ်ဖို့ အသာထား လူတောမတိုးသော၊ မဝံ့ရဲသောမိန်းမတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲလိုလို အေးရာအေးကြောင်း ချောင်တစ်ချောင်မှာ ကုပ်ကုပ်နေတတ်သောသူသာ ဖြစ်ပါတယ်။
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Tolerance of intolerance is cowardice. -Ayann Hiris Ali
အေရမ်း ဟီရိစ် အလီပြောသကဲ့သို့ သဘောထားသေးခြင်း/သည့်မခံသင့်သောအရာများကို သည်းခံခြင်းဟာ သရဲဘောကြောင်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်မကတော့ ထိုသို့ လူအချင်းချင်းနှိမ့်ချပြုမူပြောဆိုခြင်းများကို သူရဲကောင်းလုပ်ပြီး တွန်းလှန်သူ မဟုတ်ပါဘူး။ ရေးသားခဲ့တဲ့စာများမှာ ချောင်ပ်ိတ်အရိုက်ခံရသောကြောင့် ပေါ်ပေါက်လာခြင်းသော ညည်းညူသံများသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုလူသားအချင်းချင်းမလေးစားတာကို ကန့်ကွက်ရုံစာ/စကား ပြောမိတဲ့အခါ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ကာ စွပ်စွဲရသော လူ(တွေ)ရဲ့ စိတ်ကလည်း လေ့လာစူးစမ်း၊ခန့်မှန်းကြည့်ချင်စရာပင်။ ထိုလက်ညှိုးထိုးသူရဲ့စိတ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သရော်စော်ကားလှောင်ပြောင်ခြင်း၊ အဆင့်အတန်းခွဲခြားနှိမ့်ချဆက်ဆံခြင်း၊ အဓမ္မနှိပ်စက်အနိုင်ကျင့်ခြင်းနဲ့သာ သမာရိုးကျအသားကျပျော်မွေ့နေသလား။ အံ့သြဝမ်းနည်းမိပါတယ်။ ဒီလိုမတရားမှုတွေကို ငြင်းဆန်တဲ့အခါ ရူးနေတယ်ဆိုပြီး ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချရုံမျှမက မိုးခါးရည်မသောက်ရင် အသေသတ်မယ်လို့များ ရည်ရွယ်စိတ်ကူးထားတယ်ထင်။
ကျွန်စနစ်ကို ဖျက်သိမ်းခဲ့တဲ့သူတွေ၊ အမျိုးသမီးများ မဲပေးနိုင်ခွင့်၊ လုပ်ငန်းခွင်သာတူညီမျှမှုအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူတွေ၊ ကလေးသူငယ်တွေကို မတရားခိုင်းစေမှုလွတ်မြောက်အောင် ကြိုးပမ်းနေသူတွေ၊ နောက်ဆုံး စစ်ကျွန်အဖြစ်မှ လွတ်မြောက်အောင် ကြိုးစားနေသူတွေမှ အစ မသာစရိတ်မရှိတဲ့သူတွေအတွက်ကူညီနေတဲ့ နာရေးကူညီမှုအသင်းတွေအဆုံး အများနဲ့မတူကြောင်း ရပ်တည်ပြသချင်တဲ့ စိတ်တစ်ခုတည်းရှိတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ တစ်ချို့သူတွေအတွက် နားလည်ဖို့ သိပ်ခက်နေသလား။ လူအချင်းချင်းလေးစားစွာ ဆက်ဆံဖို့ဆိုတာ အသိစိတ်မှာ လက်သင့်မခံနိုင်ဘူးလား။
ပြီးခဲ့တဲ့လက One Billion Rising သန်းတစ်ထောင်လှုပ်ရှားမှုဆွေးနွေးပွဲအလုပ်ရုံက အကြောင်းအရာများကိုလည်း သတိရမိပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင် အမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်၊ လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူ monique wilson က ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသွားပါတယ်။ သန်းတစ်ထောင်လှုပ်ရှားမှုဆိုတာ အမျိုးသမီး၊ကလေးသူငယ်မိန်းကလေးများကို ပြုလုပ်သော မတရားမှု၊ အနုနည်းမှ အကြမ်းဖက်မှုအဆုံး စော်ကားအနိုင်ကျင့်မှုမျိုးစုံကို အကဖြင့် တော်လှန်ကန့်ကွက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် မိန်းကလေးများက (ချစ်သူ/တွဲနေသူရဲ့) သွေးဆောင်ဖြားယောင်းမတရားပြုကျင့်အခံရဆုံးနေ့တစ်နေ့ဖြစ်တဲ့ ချစ်သူများနေ့မှာ ကကွက်ဖြင့် မိန်းကလေးတွေ ခံစားရသော ဖိနှိပ်ညှင်းပန်းခံရမှုအလုံးစုံကို လက်မခံ၊ဆန့်ကျင်ကြောင်း လူထုကို သတိပေးနှိုးဆော်လှုပ်ရှားခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အခမ်းအနားမှာ ကြည့်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုတစ်ခုကို မျှဝေပါရစေ။
ထိုသို့မတရားမှုကို ဆန့်ကျင်သော လူသားအားလုံးကိုရော သူများနှင့် မတူခြားနားတာ ပြချင်လို့ ရှေ့ထွက်ရပ်သည်လို့ ကဲ့ရဲ့အတင်းဆိုကြဦးမလား။ အမှန်စင်စစ်မှာတော့ မိန်းကလေးများရဲ့ ဗီဇသွေးမှာ ရန်လိုမှုနည်းပါးပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာနေလိုသူများဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ရန်နည်းလိုသော ကျွန်မအနေဖြင့် တတ်နိုင်သမျှနှုတ်ကိုပိတ် တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်သာ နေလိုလှပါတယ်။
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, However, something must be said, and there are times when silence becomes an accomplice to injustice. -Ayann Hiris Ali
ဒါပေမယ့်လည်း အေရမ်း ဟီရိစ် အလီပြောသကဲ့သို့ ငြိမ်သက်နေခြင်းဟာ မတရားမှုမှာ ကြံရာပါဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာ တစ်ခုခုပြောရတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမျာနဲ့မတူကြောင်း အရှေ့မှာရပ်တည်ပြသချင်တဲ့ စိတ်ရှိတယ်လို့ စွပ်စွဲဦးတော့ နှိမ့်ချစော်ကားသူများဖက်မှာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ အတူမရပ်နိုင်တဲ့အတွက် ဝမ်းနည်းပါတယ်လို့ ဆိုပါရစေ။
ထိုသို့နှိမ့်ချစော်ကားသူများ၊ ထိုသူများကို အားပေးအားမြှောက်ဒူးထောက်ရိုကျိုးသူများနဲ့ အတူရှိမနေနိုင်မှုအတွက် ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုပင် မဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲကဲရဲ့ခံလည်း ရွာပြင်မှာ တစ်ဦးတည်းနေရလည်း ကိုယ့်လုပ်ရပ်အတွက် ကျေနပ်ဝမ်းသာနေဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စာရေးသူ မယ့်ကိုး at 12/24/2013 10:26:00 AM
မယ့် ရေးသလိုပါပဲ ငြမ်သက်နေခြင်းဟာ မတရားမှုမှာ ကြံရာပါဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာ ဖိနှိပ်သူတွေဘက်မှာ မရပ်တည်ပေးနိုင်ပါဘူး.
26/12/13 12:22 PM
Merry Christmas & Happy new year to you. I am your silent reader.
Esther @ Khin Soe Thwe
27/12/13 7:13 PM
မမ မယ် နဲ့ အတူ ရွာပြင်လိုက်ခဲ့မယ် နော်။
5/1/14 2:13 PM